Madagasikara an'i Kristy
Auteur: Tahina Ramakavelo
Inona no tenin'i Jesoa amintsika mpianany rehetra eto?
Inona no tenin'i Jesoa amintsika mpianany rehetra eto? Raha mifankatia tokoa isika, de mpianatr'i Jesoa. Isika eto ve mifankatia? Ny mpanao politika eto ve mifankatia? Mpianatr'i Jesoa tokoa ve isika? Manaraka ny tenin'i Jesoa ao @ Baiboly ve isika? Raha milaza isika fa tia an'Andriamanitra isika, kanefa isika mankahala ny mpiray tanindrazana amintsika de mpandainga. (1 Jn.4.20);
Raha mankahala ny kristianina mitovy aminao ianao, de mpamono olona. (1 Jn.3.15)
Ary izao koa no fantaro fa ny mpamono olona, ny mpandainga de tsy manana anjara amin'ny fanjakan'Andriamanitra. (Apokalipsy 22.15)
"Izay rehetra mankahala ny namany iray finoana dia mpamono olona; ary fantatrareo fa tsy misy mpamono olona manana ny fiaina-maharitra mandrakizay mitoetra ao anatiny." - (1 Jaona 3. 15)
"Raha misy manao hoe: Manam-pitiavana an'Andriamanitra aho, nefa mankahala ny namana iray finoana, dia mpandainga izy; (...)" - (1 Jaona 4. 20)
"Ny hahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatro ianareo, dia raha mifankatia ianareo. " - (Johany 13. 35)
"Mifankatiava hatrany toy ny mpiray tampo ao amin'i Kristy." - (Hebreo 13. 1)
"(...) mifankatiava fatratra, satria ny fitiavana no mikosoka ny fahotana maro niavosa." - (1 Petera 4. 8)
"(...) ny tsy mpino, ny mpanimbazimba, ny mpamono olona, ny mpijangajanga, ny mpanao ody ratsy, ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra, dia hanana ny anjarany any amin'ny farihy mirehitra afo aman-tsolifara: izany no fahafatesana faharoa." - (Apokalipsy 21. 8)
"Fa any ivelany kosa izay manana toe-panahy maharikoriko: dia ny mpanao ody ratsy, ny mpijangajanga, ny mpamono olona, ny mpanompo sampy ary izay rehetra tia lainga sy mpandainga." - (Apokalipsy 22. 15)
(Photo: Présidence de la République de Madagascar, 2018)